Vaovao - Ahoana ny fomba fampisehoana hafanan'ny fiara?
Ahoana ny fomba fampisehoana hafanan'ny fiara?
1, famafana ny hafanan'ny mpankafy, akorandriaka amin'ny jiro maharitra lava mba hanamafisana ny famafana ny hafanana
2, ny fampiasana vombony alimo, izay fomba mahazatra amin'ny fanaparitahana ny hafanana, miaraka amin'ny vombony aluminium ho ampahan'ny akorandriaka hampitomboana ny velaran'ny faritra mafana.
3. Ny hydrodynamika an'habakabaka, amin'ny fampiasana ny endrik'ilay akorandri-jiro, dia mamokatra rivotra mifangaro, izay fomba mora vidy hanamafisana ny fanaparitahana ny hafanana.
4. Mifofofofo ny vatan'ny efijery, ary ny habaka ao ambadiky ny vatan'ny efijery dia raisina rehefa mametraka ny vatan'ny efijery mba hamoronana rivotra mikoriana.
5, ny fitsaboana hafanana amin'ny taratra ambonin'ny tany, ny velarana akorandriaka vita amin'ny jiro hanaovana fitsaboana hafanana taratra, somary tsotra ny mametraka loko hafanana amin'ny taratra, afaka maka ny hafanana amin'ny alàlan'ny akorandriaka amin'ny fomba taratra.
6, ny fampiasana ny fampidirana hafanana amin'ny fitarihana hafanana, ny fitarihana hafanana avoakan'ny seramika, ny tanjon'ny fihenan'ny akorandriaka dia ny hampihenana ny hafanan'ny fiasan'ny chip fampiratiana, noho ny chip LED izay matetika mifehy ny fifehezana hafanana, ny coefficient fanitarana hafanana ary ny fahasamihafana coefficient material dia lehibe dia lehibe, ny chip Chip dia tsy azo atsofoka mivantana, hisorohana ny fihenan'ny hafanana hafanana avo sy ambany.
7, famafana ny fantsom-pandrefesana hafanana, mampiasa teknolojia fantsom-pandrefesana hafanana, ny hafanana avy amin'ny chip fampiratiana mankany amin'ny volan'ny fanaparitahana hafanana.
8, ny akorany plastika fampandehanana hafanana, ny akorandriaka plastika amin'ny famolahana tsindrona dia nameno ny fitaovana fitehirizana hafanana, mba hampitomboana ny fitarihana hafanana sy ny fahaizan'ny fanaparitahana hafanana an'ny akorany plastika.
9, rehefa miseho ny efijery flash, ny efijery mitsambikina, ny ampahany amin'ny vatan'ny efijery dia tsy manjelatra, manjavozavo ny vatan'ny efijery ary misy olana hafa, tokony hifandray amin'ireo mpiasa teknika hijerena ara-potoana, hisorohana ny fizaran-tany fohy, herinaratra tsy fahombiazana ateraky ny afo fampirantiana